Masuuliyiin sare oo Kenyan ah oo loo xirayo rabshadihii Gaarisa iyo Islii. - Caasimada Online
Home Warar Masuuliyiin sare oo Kenyan ah oo loo xirayo rabshadihii Gaarisa iyo Islii.
Masuuliyiin sare oo Kenyan ah oo loo xirayo rabshadihii Gaarisa iyo Islii.
Dowlada Kenya ayaa ku hanjabtay in Masuuliyiin Sar sare oo Dowladooda ka tirsan inay xilkooda ku wayn doonaan rabshadahii ka dhacy Magaalada Gaarisa iyo Waliba kii ka dhacay Xaafaada Islii.
Gudoomiye ku xigeenka Baarlamanka dalka Kenya Faarax Macalin oo la hadlay Warbaahinta soomaalida gaar ahaan kuwa Muqdisho ayaa sheegay in layskula xisaabtami doono dhibaatadii soomaalida ku gaartay Gaarisa iyo Islii.
Faarax Macalin ayaa carabaabay inay baarayaan Cida kulug leh rabshadaha ka dhacay Kenya hadii uu Masuul Dowlada Katirsan uu noqdana waxaa lagu qaadayaa ayuu yiri Sharciga u dagan Dowlada.
Warar ayaa sheegayay in Masuuliyiin Kenya ah arimo Siyaasad ah ay ku beegsadeen dadka Shacabka ah laakiin Faarax Macalin ayaa ku nuux nuuxsaday in dalka uu sharci kajiro kaas oo qabanaya Madaxwayne ilaa Wasiir.
Waxaa uu sheegay in gudi ay u sareen baaritaanka Waxyabaha ka dhacay Gaarisa iyo Islii oo dadka Soomaalida boob iyo Kufsi loogu gaystay.